Home News Qudbad jeedinta Musharaxiinta ku loolamaya Xilka Gud. Baarlamaanka oo la soo gaba...
Qudbad jeedinta Musharaxiinta ku loolamaya Xilka Gud. Baarlamaanka oo la soo gaba gabeeyay
Waxaa maanta oo Khamiis ah la soo gaba gabeeyay dhageysiga khudbadaha Musharixiinta u taagan qabashada xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Shalay ayaa waxaa khudbado jeediyay ilaa Lix Musharax oo ka mid ah xubnaha u taagan xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka, waxayna ka hadleen mid walba waxa uu qabanayo hadii uu ku guuleysto xilka.
Sidoo kale maanta ilaa Shan Musharax oo ahaa kuwa harsan ayaa jeediyay khudbadahooda, waxaana ugu dambeyn la soo gaba gabeeyay khudbadaha Musharaxiinta.
Xubnaha maanta Baarlamaanka khudbadaha ka horjeediyay ayaa waxa ay kala yihiin Xildhibaan Shariif Sheekhunaa Maye, Xildhibaan Maxamed Sh. C/raxmaan Mursal, Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, Xildhibaan Maxamud Macalin Yaxye iyo Xildhibaan Iimaan C/laahi Nuur